के महिलाहरु कुखुराको फुल जस्तै हुन त एकचोटी फुटेपछि काम नलाग्ने ? - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 07:12
नबिन बिक,चीन २०७७ असार १५ गते १०:३० मा प्रकाशित
नबिन बिक, चीन । यो धर्तीको आधा आकाशले महिलाहरुलाई ढाकेको छ तर यो समाजले उनीहरुलाई एक दास जसरी राखेको छ। यो देश किन पुरुष प्रधान छ? महिलाहरु प्रति हाम्रो समाज किन यति सार्है अनुदार छ? छोरी जन्मिदै नाक खुम्च्याउछन, बल्ल तल्ल समाजको डर र लोकलाजले छोरीलाई पढायो लेखायो, बिहे गरिदिनै हतार हुन्छ। पराई घर जानी जात माईतमा धेरै राख्न हुदैन भन्छन र पढ्दा पढ्दै बिहे गरेर पठाई दिन्छन । केटा पक्षले बाँकी पढाई बिहे पछि गराईदिने आश्वासन सहित बिहे गरेर लिएर जान्छन । नया घर पुगेसी,सासु ससुरालाई नातिको मुख हेर्न हतार हुन्छ । पराई घर गैसकेसी उनको आफ्नो केही चल्दैन । सानोमा दाजु भाई, बाउ,काका सबैको खटनमा चल्ने महिला अहिले फेरी श्रीमान,सासु, ससुरा,देवर नन्दा सबैको खटनको फन्दामा पर्छिन ।
धेरै महिलाहरु घरेलु हिंसाको शिकार भएका हुन्छन महिलाहरु बढी प्रताड़ित हुने भनेको कि त दाईजो नल्याएर । कित छोरा नपाईदिएर वा गर्भ नबस्दा धेरै प्रताडीत हुन्छन । हेला गर्छन, कुटछन तर कसैले ब्यक्त गर्छन ,कसैले गर्दैनन, कतिले सहन नसकेर आत्महत्याको बाटो पनी रोज्छन । यसरी छेरीहरुले आत्महत्या गर्नुमा त्यो घर र समाज भन्दा पनि ठुला दोषी र अपराधी उनका आफ्नै बाउ आमा हुन्छन । किनकी जब छोरीले आफ्नो घरमा भईरहेको झगडा र प्रताडनाको बारेमा जब आमालाई सुनाउछिन र आमाले बाउलाई सुनाउछिन । तब फेरी बुबाआमा मिलेर आफ्नै छोरीलाई सम्झाउन थाल्छन, छोरी अब नहुनु बिहे भैसक्यो, अब केही उपाय छैन, हामी तल परिसका छौ । अलि सहेरै बस्नु,छोरी मान्छेको जात ,कुखुराको फुल जस्तै हुन्छ, एक चोटी फुटे पछि काम लाग्दैन भन्छन । मिलेर बस्नु ,नत्र तिमी फर्किएर माईत आउदा सामाजले के भन्ला,नातापाता ईष्टमित्रले के भन्लान? हामी समाजमा कसरी मुख देखाउने छोरी ? हामी त जिउदै मरे तुल्य हुन्छन छोरी, ईमोशनल ब्ल्याकमेल गरेरै भए पनि छोरीलाई दमन र हिंसा सहेरै भए पनि बस्न बाध्य बनाउछन । आफ्नो खोक्रो सान र मानको लागी आफ्नो छोरीको बलिदान दिन्छन । छोरी पनि आमा बाबाको ईज्जतको लागी ,मन र मान राख्नको लागी सबै दुख पिएर बस्छिन । नर्कको जीबन बाँचेर भए पनि बाउ आमा र माईतीको ईज्जत धानि दिईएकी हुन्छिन । यसरी बस्दा पनि उस्तै परे कुनै दिन श्रीमान, सासु ससुराले नै मारिदिन्छन यदि बाँचीन भने पनि श्रीमान,सासु, ससुराको दबाब र प्रताडना सहन नसकेर कुनै दिन यो धर्ती छोडेर फेरी कहिल्यै नफर्किने गरी आफै जान्छिन। एउटा नारीको यहा अकालमै मृत्यु हुन्छ ।
अब म यहाँ सबैलाई के सोध्न चाहन्छु भने के छोरी मान्छे साच्चीनै कुखुराको फुल जस्तै हुन त? एक चोटी फुटे पछि काम नलाग्ने? यो भनाई प्रति म पुर्ण रुपमा असहमत छु, पहिला त छोरीलाई कुखुराको फुल संग तुलना गर्नु नै गलत छ । यदि गरिहाल्नुभयो भने पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु की,कुखुराको फुल फुट्यो भने अमलेट बनाउन सकिन्छ, अन्डा भुर्जी बनाउन सकिन्छ, सुप पकाएर खान सकिन्छ, जन्मदिनको केक बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अन्डा फ़्राई राईस पनि बनाउन सकिन्छ । त्यसैले छोरीलाई कुखुराको फुल संग दाँजेर त्यसै अकालमा मर्न नदिनुस, तपाईले राजकुमारी जसरी माया गरेर हुर्काएको छोरीलाई अरुलाई मार्न नछोडिदिनुस।
महिलाहरु प्रति हाम्रो समाज किन यति सार्है अनुदार छ?
एकचोटी बिहे गरेर गईसकेको छोरीहरु छोडपत्र गरेर फेरी माईत फर्कि आउदा न त आकास नै खस्छ । नत यो धर्ती नै भासिन्छ, न हावा चल्न बन्द हुन्छ ,न सुर्य र तारा उदाउन नै छोड्छन । त्यसैले छोरीलाई त्यो घरमा बस्नु छैन । उनलाई त्यो जीबन साथी चाहिदैन भने कर नगर्नुस, सहर्ष स्वागत गर्नुस र हौसला बढाउनुस। तपाईकी छोरी जिउदो भए त्यस्ता ज्वाई कति पाईन्छ कति, सधै अरुले के भन्ला भनेर सोच्नु भयो भने तपाईको जीबन एक दिन बर्बाद हुन्छ। त्यसैले अरुको पछि नलाग्नुस,आफ्नै खुशी र सुखको पछि लाग्नुस, तबमात्र तपाईको जीबन सफल हुनेछ ।
नर्कको जीबन बाँचेर भए पनि बाउ आमा र माईतीको ईज्जत धानि दिईएकी हुन्छिन ।
पुरुषले श्रीमती बितेको बर्षदिन पुग्न नपाउदै छाती ठोकेर अर्को श्रीमती ल्याउदा समाजमा कत्रो मानसम्मान गरिन्छ । भोज भतेर नाच गान गरेर, गर्ब गरिन्छ तर समाजमा बिधुवा बुहारी वा छोरीलाई आजिबन मरेको पतिको फोटो हेरेर मात्रै जीबन काटन बाध्य पारिन्छ? छोरी बुहारीलाई जीबन साथी चाहिदैन? महिला बिना पुरुषलाई मात्रै गार्हो हुने हो? महिलालाई चै गार्हो हुदैन? उनीहरुको बारेमा एक कदम अघि बढेर किन सोच्न सक्दैनौ?
नेपालमा एकजना चर्चित बैकर रबिना देशराजले भनेकी थिईन,दुईटा श्रीमान राख्न चाहन्छु । उनको त्यो भनाईलाई म समर्थन गर्छु, किनकी पुरुष प्रधान समाजलाई त्यो भनाई एउटा गतिलो झटारो थियो। पुरुषले २-३ जना श्रीमती राख्दा पनि सजिलै पचाउने यो समाजले कुनै महिलाहरुले चिनेको साथीको बाईक वा कारमा संगै हिडेको देखेमा मात्रै पनि नराम्रो आँखाले हेर्ने गर्छन । म तपाईहरुलाई एउटा गोप्यकुरा भन्न चाहन्छु कुनै पनि पुरुषहरु जस्तो सुकै सोझो भए पनि आफ्नो जीबनकालमा कम्तिमा पनि ४-५ जना महिलाहरुसंग सुतिसकेका हुन्छन । पुरुषहरु यो संख्या जति बढाउदै जान्छन त्यति गर्ब र बहादुर महसुस गर्छन । र आफ्नो नजिकको साथीहरु कम्तिमा पनि २-४ जना संग त यस्ताकुराहरु सगर्व सुनाउने गर्छन, मैले त फलानीलाई त ……..तर त्यही महाशयले बिहे गर्दा कुमारी भर्जीन श्रीमती चाहिन्छ । आफु चै दुनियाँ भ्याएर हिडने? तर आफुलाई चै भर्जीन श्रीमती चाहिन्छ, यो भन्दा हास्यास्पद र पाखण्डी सोचाई अरु के हुन सक्छ?
मिलेर बस्नु ,नत्र तिमी फर्किएर माईत आउदा सामाजले के भन्ला,नातापाता ईष्टमित्रले के भन्लान?
चीन, अमेरिका,युरोप तिर बिचार नमिले छोडपत्र गर्ने चलन सामान्य हुन्छन किनकी उनीहरुले राम्रोसंग बुझेका छन की जहा जन्म हुन्छ,त्यहा मृत्यु पनि हुन्छ। जब बिबाह हुन्छ त्यहा छोडपत्र पनि हुन्छ । श्रीमान श्रीमती भनेको एक रथको दुई पांग्रा हुन, यदि कुनै एउटा पांग्रामा सानो पंचर भयो भने टाल्ने कोसीस गर्नु पर्छ । ठुलै भ्वाङ परेको छ भने चक्कै फेर्नुपर्छ, नत्र त्यतिकै गुडाउन थाल्यौ भने घस्रण भएर आगो लागी पुरा रथलाई जलाएर खरानी बनाईदिन्छ।
एन्जेला मर्केल, हिलारी क्लिनटन,थेरेसा मे,सोनिया गान्धी,आङ साङ सुकी,अनुराधा कोईराला,पुस्पा बस्नेत,शुसीला कार्की, बिद्या देवी भन्डारी, मनीषा कोईराला, रबिना देशराज श्रेष्ठ जस्ता अनगिन्ती महिलाहरु छन । जस्ले पुरा देश र मल्टीनेसनल कम्पनी हाकेर बसेका छन। जस्ले आफ्ना पुरा परिवार र सम्पूर्ण महिलाहरुलाई गौरवान्वित महशुस गराएका छन। महिलाहरुले पनि अवसर र सपोर्ट पाए भने पुरुषले भन्दा पनि राम्रो गरेर देखाउन सक्छन तर उनीहरु सधै ठुलो बृक्षको छेउमा फुल्ने फुलजस्ता भएर सेपमा बसेका छन । त्यो ठुलो रुखले त्यो सुन्दर सानो फुललाई कहिल्यै राम्रो संग सप्रिन दिदैन। त्यसैले हामी महिलाहरुको ठुलो बृक्षको सेप जस्तो बनेर होईन । उनीहरुको ठुलो सपोर्ट बनेर उभिनु पर्छ । हामीले संसार देखेका छौ । उदार र आधुनिक सोचका पनि छौ तर सबै भन्दा दुखको कुरा ब्यबहारमा लागु गर्न सकेका छैनौ।
( लेखक नविन बिक चीनबाट एनआरएनएको केन्द्रीय सदस्य तथा भ्रष्टचार बिरुद्दको सामाजिक अभियन्ता पनि हुन)